HORDHAC: Liverpool v Southampton - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
HORDHAC: Liverpool v Southampton
September 22, 2018 at 06:42 HORDHAC: Liverpool v Southampton2018-09-22T06:42:58+00:00 CAYAARAHA
( Premier League ) 22 Sab 2018. Liverpool ayaa marti galineysa kulankooda lixadaa ee cayaaraha Premier League dhigeeda Southampton.
Reds ayaa si xariira u adkaatay shanteeda kulan ee ugu horreeya horyaalka xili ay ku guda jiray kulamo aad u adag bishaan.
Dhaliya Liverpool Roberto Firmino ayaa si buuxda uga kabtay dhibaato isha kasoo gaaray taaso uu guul ku hogaamiyay bartamaha asbuucii hore koobka Champions League win.
Dejan Lovren ayaa ku dhawaanaya inuu si buuxda taam u noqdo kaddib dhaawac kasoo gaaray simaha laakiin ma cayaari doono, halka Divock Origi, Dominic Solanke iyo Adam Lallana ay sido kale maqan yihiin.
Southampton waxaa ku waajiba inay wayaan gool dhaliyahiida Danny Ings, kasoo aan wajihi Karin kooxda milkiyadiisa leh.
Weeraryahanka Manolo Gabbiadini ayaa wajahaya baritaano taam ahaanshao oo ku aadan dhaawac muruqaa.
Liverpool ayaa labada kulan guul ka gaartay Southampton xagaagii hore, 3-0 oo ay uga badisya kulankii Anfield iyo 2-0 oo ay uga soo adkaatay garoonkooda dhaca xeebta koonfureed ee England.
Southampton ayaa ku fashilmatay in ay gool dhaliso mid kasta oo kamida afartii dheel ee ugu dambeysay horyaalka oo ay la kulantay Liverpool.
Goolkii ugu dambeyay oo horyaalka Premier League ay ka dhliyaan Reds wuxuu ahaa bishii March 2016 waxaa ka dhaliyay Sadio Mane, oo haatan ah dhaliyaha xagaagan ugu goolasha badan Liverpool.
Liverpool ayaa damacsan inay guuleysati todabadeeda dheel ee ugu horreeya dhammaan tartamada xili cayaareedkan markii u horreysay. Waxay guuleysteen lixda dheel ee futaanka dhammaan tartamada tan iyo 1961-62.
Kooxda Saints ayaa laga yabaa inay badiso kulamada xariira oo ay marti tahay Premier League markii ugu horreysay tan iyo bilihii February ilaa March 2017, markaa oo ay garaaceen kooxaha Sunderland iyo Watford.
« HORDHAC: Manchester United v Wolverhampton Wanderers
HORDHAC: Cardiff City v Manchester City »